Xukuumada Maraykanka oo xoogaga Daalibaan la leh wadahadalo qarsoodi ah – SBC
Xukuumada Maraykanka oo xoogaga Daalibaan la leh wadahadalo qarsoodi ah
Waxaa dalka Afganistan ka socda dadaalo loogu jiro sidii nabada loo dhex dhigi lahaa dowlada Afganistan iyo weliba Daalibaanka ay reer galbeedku u yaqaanaan qunyar u socodka.
Madaxweynaha Afganistan Xaamid Karzai ayaa sheegay in ay jiraan wadahadalo haatan u socda Dowlada Maraykanka iyo weliba Daalibaanka,iyadoona sida uu sheegay looga gol leeyahay in wadahadalo nabadeed kooxdaasi lala galo.
Karzai waxaa uu tilmaamay in ay xiligan dhowdahay wakhtigii lasoo afjari lahaa dagaalada iyo weliba joogitaanka Ciidamada shisheeye ee dalkiisa
Wasiirka Difaaca Dowlada Maraykanka Robert Gates ayaa horay u sheegay in dhamaadka sanadka ay jiri karto wadahadalo siyaasadeed oo ay la galaan Daalibaanka si isfahan looga dhex abuuro daalibaaniyiinta dhexdooda.
Dhinaca kale waxaa sii kordhaya Khasaarihii ka dhashay qaraxyo ismiidaamin oo ka dhacay xarunta Afganistan ee Kapul wax yar kadib xiliga madaxweynaha Afganistan ka hadlay wadahadalada Maraykanku uu la wado Daalibaanka.
Dowlada Maraykanka waxaa lagu wadaa in July-da soo socota ay dalkaasi kala baxdo 97,000 oo kamid ah Ciidamadeeda dalkaasi,iyadoona sanada 2014 si rasmi ah u dhamaystiraysa soo afjarida ciidamadeeda ku sugan Afganistan.